Montagne d’Ambre : Mpizaha tany 15 voatafika
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2013 → novembre → 26 → Montagne d’Ambre : Mpizaha tany 15 voatafika
Redaction Midi Madagasikara 26 novembre 2013 Montagne Ambre, Mpizaha tany
Tao anatin’ny roa volana, indroa no nisy fanafihana mitam-piadiana tany an-toerana
Dahalo 7 mitondra fitaovam-piadiana no nanafika ny mpizaha tany tao amin’ny Montagne d’Ambre ny sabotsy tokony tamin’ny 1 ora sy sasany. Nisaron-tava avokoa ireo mpanafika ireo, araka ny tantarain’ireo « guide » nitondra azy ireo. Lasa ny vola, ny téléphone, ny ordinateur, portable, passeport. Misy andiany efatra ireo mpizaha tany voatafika ireo, tao ny ekipan’i Horlando, Zakamisy, Henri ary Jomba. Tany amin’ny lalana nandeha any amin’ny LAC no nitrangan’ny fanafihana. Tsy sambany no nisy fanafihana mpizaha tany toy izao tamin’ity toerana ity. Tsy ampy roa volana akory izay ny voalohany. Tamin’ity farany ity dia fitaovam-piadiana mahery vaika, kalaky, no nampiasain’ireo jiolahy ireo nandravana ireo vahiny.
Nanao antso vonjy ny tany amin’ny montagne d’Ambre. Tsy niandry ny zandary fa tonga dia nanao izay ho afany nanenjika ireo dahalo ireo. Matahotra mafy ireo vahiny amin’izao amin’ny hiverenany any an-tanindrazany. Ny zandary no nandray an-tanana ny fanadihadiana rehetra momba io raharaha io.
Mety tsy hisy mpizaha tany handeha intsony mihitsy any amin’iny faritra iny raha izao no mitohy. Raha ny resaka mandeha amin’izao mantsy dia tsy haniraka ny namany ho aty Antsiranana intsony ireo mpizaha tany. Anisan’ny fidiram-bola amin’iny faritra iny anefa ny fahatongavan’ireo vazaha marobe. Hisy fiantraikany amin’ny asa sy ny fampandrosoana ny faritra DIANA izao tranga izao. Mila fandresen-dahatra, fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitry ny fizahan-tany ny hanazava io fandehan-draharaha io.